Yiba Ukwaleka-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
IFumax iya kusebenzisa iCoating kwindibano yePCB ngokwezicelo zabathengi.
Inkqubo yokwaleka ngokuqhelekileyo ibalulekile Ukukhusela iibhodi kumswakama kunye nongcoliseko (olunokubangela ukuvuza kombane).Ezi mveliso ziqhele ukusetyenziswa kwisicelo sokufuma njengegumbi lokuhlambela, iikhitshi, usetyenziso lwangaphandle ... njl.
IFumax inabasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nezixhobo zokugquma
I-Coating yifilimu eqinileyo eqhubekayo efunyenwe ngesicelo sokugquma ngexesha elinye.Uluhlu oluncinci lweplastiki olufakwe kwi-substrate efana nentsimbi, ilaphu, iplastiki, njl njl ukwenzela ukukhusela, ukugquma, ukuhlobisa kunye nezinye iinjongo.Ukwaleka kunokuba yigesi, ulwelo, okanye ukuqina.Ngokuqhelekileyo, uhlobo kunye nesimo sokugquma zichongwa ngokwe-substrate ukuba itshizwe.
1. Ukakhulu iindlela:
2. I-Ni/AU engenambane
3. ITin yokuntywiliselwa
4. I-OSP: I-Oragnic Solderability Preservative
2. Umsebenzi wokwaleka:
Khusela kubumanzi nakwizinto ezingcolisayo (ezinokubangela ukuvuza kombane);
Ukumelana nokutshizwa kwetyuwa kunye nokungunda;
I-Anti-corrosion (efana ne-alkali), iphucula ukuchasana nokutshatyalaliswa kunye nokukhuhla;
Ukuphucula ukumelana nokudinwa kwamalungu e-solder angenalothe;
Cindezela ukukhutshwa kwe-arc kunye ne-halo;
Ukunciphisa impembelelo ye-vibration yomatshini kunye nokutshatyalaliswa;
Ukumelana nokushisa okuphezulu, ukukhulula uxinzelelo ngenxa yokutshintsha kweqondo lokushisa
3. Ukusetyenziswa kokwaleka:
SMT & PCB indibano
Surface Mounted Package Adhesive Solutions
Component Encapsulation Solution
Iimveliso zombane eziphathwayo kunye namalungu
Indibano ye-LED kunye nokusetyenziswa
Ishishini elitsha lamandla
PCB Board Coating Solution
4. Iimpawu zenkqubo:
Ngokumalunga nenkqubo yokwaleka komphezulu we-PCB, abavelisi be-PCB bahlala bejongene nomngeni wokulinganisa imveliso, izixhobo, utyalo-mali lwabasebenzi kunye nokhuseleko.Kwangaxeshanye, kufuneka baqwalasele imiba yolawulo nendalo ebandakanyekayo kwinkqubo.Iindlela zokugquma komhlaba eziqhelekileyo, ezifana nokutshiza kunye nokutshiza ngemipu yomoya, ngokuqhelekileyo zifuna izinto eziphezulu (igalelo kunye nenkunkuma) kunye neendleko zabasebenzi (ubuninzi bomsebenzi kunye nokhuseleko lokhuseleko lomsebenzi).Izinto zokugquma komhlaba ezinyibilikayo zinyusa iindleko.
5. Ubuncedo bokugquma:
Isantya esipheleleyo sikhawuleza.
Ihlala ixesha elide kwaye inokuthenjwa.
Ukuchaneka okulungileyo kokukhetha (inkcazo yomda, ubukhulu, ukusebenza kakuhle) kunokufezekiswa.
Isoftware ixhasa ukutshintsha imo yokutshiza kwimo yokubhabha, kwaye ukusebenza kakuhle kokutshiza kukuFafaza okuphezulu.
IRigidFlex Pcb Odm PCba Ibhodi yeSekethe eprintiweyo IPcb Fabrication kunye neNdibano IFlex PC IPcb enamacala amabini